Biko Kwụsị Comptụle NSA Nnyocha na Ahịa | Martech Zone
Otu n'ime mkparịta ụka m na-ahụ na-arịgo elu nke NSA nyocha esemokwu bụ na ụlọ ọrụ na-anakọta ụdị data a na ndị America maka ahịa ahịa.
Maka ndị gị na mpụga United States, Iwu ahụ doro anya Ndezigharị nke anọ na Bill of Rights anyị dị ka ụmụ amaala.
Ndezigharị nke anọ na Bill of Rights
Ikike nke ndị mmadụ ịnọ na nchedo ndị ha, ụlọ ha, akwụkwọ ha, na nsonaazụ ha, megide nyocha na njide na-enweghị isi, agaghị emebi, ọ nweghịkwa akwụkwọ ikike ga-ewepụta, mana ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara ya, nke a oathụrụ iyi ma ọ bụ nkwenye kwadoro ya, yana ịkọwa karịsịa. ebe a ga-enyocha ha, na mmadụ ma ọ bụ ihe a ga-ejide.
Ma ị kwenyere na nchịkọta meta data kwesịrị ma ọ bụ na ekwesighi ikpuchi ya n'okpuru mmezigharị nke 4th agaghị arụ ụka ebe a. Enwere m nkwenkwe nke m mana abughi m onye ọka iwu Iwu (yana ọbụnadị na ha ekwenyeghị).
Ihe m chọrọ ịrụ ụka bụ ebumnuche na usoro usoro data meta. Maka ụlọ ọrụ, a na-achịkọta data a iji hazie ma melite ahụmịhe onye ọrụ na ntanetị na ebumnuche nke ịbawanye nnweta, njigide ma ọ bụ uru ndị ahịa. Nke ahụ bụ isiokwu na-emetụ n'ahụ maka ụfọdụ - ọkachasị etu esi achịkọta data yana ma ndị na-azụ ahịa nyere ha ikike. Imirikiti oge ha na-eme, mana e liri ya na mumbo-jumbo iwu nke usoro ojiji ị kwenyere mgbe ị debanyere ọrụ.
Amaara m na m bụ onye ahịa ka echiche m wee gbagọọ agbagọ, mana ahụrụ m na ụlọ ọrụ na-a toa m ntị. Achọrọ m ịkọrọ ha ozi m chọrọ ka ha jiri ya mee ka ahụmịhe ndị ahịa m ka mma. Ọ bụrụ na nke ahụ pụtara nkwanye ngwaahịa ma ọ bụ ozi ezubere iche, biko mee! Enwere m mmasị na ngwaahịa!
Ugbu a, ka ewetara ihe mgbaru ọsọ nke ndị na-ere ahịa na ihe mgbaru ọsọ nke ọchịchị nnyocha. Gọọmentị na-achụ meta data bụ chọpụta usoro nke ahụ na-eduga na nyocha miri emi nke ụmụ amaala dabere na omume ha. Nnyocha ahụ nwere ike iduga ebubo na mkpochi. Ya mere, mgbe ndị na-ere ahịa na-achọ ire ihe na data… gọọmentị na-achọ ịchọta ma tụọ ndị mmadụ mkpọrọ iji kpuchido ndị America.
Nke ahụ adịghịdị nso na otu ya biko kwụsị ịtụnyere ha abụọ.
Anaghị m ekwenye na m ga-ekwenye ekwenye, mana biko leba anya n’akụkọ gbasara ndị anyị anwụchiri n’obodo a. Dabere na data, 95% nke nkwupụta felony bụ nsonaazụ nke ịrịọ arịrịọ na-enweghị ihe akaebe ebumpụta ụwa egosiputara, ọtụtụ anaghị etinyekarị mkpesa.
Yabụ ka anyị were ebe a. Ana m eme njem nke ukwuu ma m na-ekwukwa banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ịntanetị. Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji kpuchie mkparịta ụka m na-ajụ gọọmentị na mgbochi gọọmentị ma ọ bụ ọrụ ndị na-eyi ọha egwu na mpaghara United States niile? Izu a, Ana m aga Chicago. Ikekwe enwere ebe ụra na Chicago n'ime kilomita ole na ole nke ụlọ nkwari akụ m na gọọmentị na-achịkọta data na. Ego ole ka m ga - ewe iji nweta ihe akaebe zuru oke iji tinye ọnụ na m? Jikọta nke a na egbe m nwere na otu esi esi apụta?
Ugbu a tinye ya niile - site na nkatọ gọọmentị, ọrụ agha m, njem m na-aga n'obodo ukwu ndị dị gburugburu ụwa, ikike m nwere egbe - ma gbakwunye ya ike nke ndị ọka iwu gọọmentị na mmefu ego na-enweghị njedebe. Enweghị m ego iji were ndị ọka iwu nwere ike dị elu iji chebe onwe m. Nke ahụ ọ bụ n'ezie ogologo oge? Echeghị m otú ahụ. Ọzọkwa, akụkọ ihe mere eme anyị juputara na ndị ọka iwu na-enweghị nchekasị bụ ndị na-emezu ikpe mgbe ha kwusịrị ikpe iji melite nchụso ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha.
Biko atụkwala ahịa ụlọ ọrụ ka ebumnuche nke inyocha ụmụ amaala maka nchekwa obodo. Ha dị nnọọ iche.
Ntị NSA: Naanị ihe edeturu na anaghị m emegide gọọmentị na agaghị m aga agha na mpụga ịgbachitere onwe m. Ana m akwado ndị ọchịchị obodo na ndị mmanye iwu. M mgbe onye na-emegide nke federalization, ezie na, n'ihi na ya inefficiency, overreach na ire ure.
Tags: marketingnsa nnyocha
daalụ, n'ikpeazụ ụfọdụ mgbagha !!!!
Jun 4, 2015 na 11:53 AM
Ezigbo echiche ebe a Doug. Ọ bụ eziokwu karịa na anyị na-amalite ịhụ mkparịta ụka gafere na-eme na NSA, data buru ibu, ọkachasị na ụwa nke nyocha amụma. Dị ka ị na-ekwu, ọ bụghị n'ezie ezigbo nyocha iji lelee akụkọ ahụ site na agbanyeghị. M ga-arụ ụka na akụkụ nke ihe na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịrụ ọrụ ka mma nke "ịghara ịkwụsị" ma ọ bụ "ịbụ ndị na-adịghị njọ" bụ ikike dị gburugburu echiche nke ịdị n'etiti ndị ahịa. Enwere ihe dị ka ndị ahịa BAD. Ha nwere ike iri ike na akụrụngwa, mebie ọnụego mgbanwe gị, wdg.
Kedu ihe kpatara m ga-eji tufuo nnukwu ụgbụ si ebe ahụ weghara ụyọkọ junk, ma o doro anya na iwe na-ewe ndị mmadụ na usoro ahụ. Ọ bụrụ na ị gwara m na enwere m nhọrọ abụọ 100 na - eduga ma ọ bụ 1,000 na - eduga bọket ọ bụla maka $ 1,000. Agbanyeghị, amaara m na ndu 100 ahụ dị ka ọfụma mechiri emechi / merie. M na-aga na-egwu percentages na itinye ego na 100 na-eduga. N'ihi gịnị? Maka na ọ ka dị mkpa na anyị ga-enye ndị ahịa anyị dị mma ka anyị fee ya ozi ọma. Iji gaa n'ihu na ntughari baseball, ị chọghị ka ndị ahịa gị na-agagharị agagharị na junk ọ bụla… Ohere inweta bụ na ha ga-egbu ọtụtụ. Ọ bara uru karịa ịbawanye ụda batrị nke ndaghachi na ọkwa ha nwere ike ịkwọ ụgbọala.
Uche a, m ga - arụ ụka ọ bụghị naanị na ọ na - eweta mkparịta ụka ire ahịa dị elu kama ọ na - emekwa ka ahụmịhe ndị ahịa. Echere m na a ga - enwe ndị na - azụ ahịa na ụyọkọ ahụ ga - agba ma kpee ekpere ma mee ka anyị dị ka ndị na - eche echiche NSA. Ka anyị na-abanye ụwa nke ọhụụ ọzọ na DPM (njikwa usoro nhazi data), nyocha amụma, na akpaaka - ndị na-ere ahịa n'oge a kwesịrị ịga n'ihu akụkọ a banyere ezigbo ike na nzube nke teknụzụ a. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-aga n'ihu ịdaba na akụkọ ihe mere eme nke nnu Snowden.